Hiran State - News: Madaxweyne Shariif oo maanta ceeb iyo waji gabax siyaasadeed kala kulmay mudanayaal laga celiyey garoonka.
Madaxweyne Shariif oo maanta ceeb iyo waji gabax siyaasadeed kala kulmay mudanayaal laga celiyey garoonka.
Mogdisho: Kedib 21 sano oo dowlad la,aan ah waxaa maanta dalka ka dhacay mid ka mid ah dhacdadii ugu yaabka badneyd ee soo marta siyaasada Somaliya. waxaa maanta garoonka diyaaradaha loo diiday iney ka dhoofaan mudanayaasha baarlamaanka Somaliya oo iyagu safar shaqo uga socday dalkaasi Kenya halka la sheegay iney qaar ka mid ah mudanayaashaasina ay u socdeen arimo caafimaad.
hadaba waxaa iska cad in aan lagu shaqeyn axdi qarameed waxaana meesha ka baxay hanaankii dowladnimo. mudane baarlamaan waxaa dalka inuu ka dhoofo loo diidi karaa markuu yahay ajnabi wadanka ku joogay ama ku soo galay Viso la,aan, waxaan walito dhicin muwaadin Soamliyeed oo ah mudane baarlamaan oo hadane ku baxay amar ka yimid afhayeenka baarlamaanka inuu madaxweynaha Somaliya is hortaago oo waliba la garaaco qaar mudanayasha ka tirsan.
Amarkii madaxweynaha oo waliba ahaa in la dilo mudanayasha hadii ay amarka diidaan ayaa xili danbe oo caawa ah ay arintii la xumaatay xukumada Farmaajo oo iyadu waxkasta oo xumaan ah u sameyneyso aad 1 sano oo dheeraad ah heshid ayaa waxaa hareeyey xarunta madaxtooyada muran iyo is qabqabsi baahsan waxaana si madaxweynaha loogu ceeb qariyo caawa hal mar afka furtay wasiirka arimaha gudaha oo sheegay inuu isagu amarka lagu xanibay laguna garaacay mudanayaasha baarlamaanka uu bixiyey.
Mar aanu la xariirnay dad sharci yaqaan ah oo mudo ku soo dhax jiray siyaasada Somaliya ayaa sheegay in hab dhaqanka dowlada hada jirta uu la mid yahay amaba ka liito hogaamiya kooxeedyadii dalka soo maray waqti hore.
Dhinaca kale waxaa jiro warar sheegaya in qilaafka dowlada ee haatan cirka isku shareeray uu sabab u yahay faro galin uu ku hayo hay'addaha dowlada madaxweynaha markii 3aad la caleema saaray ee dalkaasi Jabouti Mr Geelle.
Shaki kuma jiro in xukumada Farmaajo ay gabi ka laalaado inkastoo lagu soo waramayo in dhawaantaan ay iska casilayaan dhawr wasiir oo hada qurbaha ku sugan, sidoo kale masuuliyiinta dowlada oo hada kala aamin baxay ayaa intooda badan gatay Bistoolado xitaa markey ku balansan yahiin shirarka gaarka ah horey u sii qaata.
Hadii aysan golaha baarlamaanka aysan si deg deg ah ula xisaabtamin xukumada Farmaajo oo aysan hor imaan mudanayaasha hortooda waxaa dhici doonta in ciidamada dowlada oo hada kuwii horey ugu tirsanaan jiray maxkamadahii Islaamiga ay goyni u bixi doonaan kedibna Somaliya ka dhici doonto wax aan horey loo arag ayuu yiri Col Hussen oo ka mid ahaa ciidamadii xooga dalka kuwooda howl gabka noqday ee Mogdisho ku sugan.
Muwaadiniin Somaliyeed oo saadaal ka bixiyey R/wasaare Farmaajo ayaa sheegay in uusan xukunka si sahlan ugu tagi doonin ilaa dhiig ku taato iyadoo ay jano noqon doonto Marxuumkii wadanka soo maamulayey 21 sano ee Mohamed Siyaad Bare oo qoray caaradii looga qaaday xukunkii dalka horaantii sagaashameeyadii.
Culeysyada iyo waqtiga adag ee heysta xukumada Farmaajo ma yara waxaana hada ugu daran qilaafka siyaasadeed ee ka soo cusboonaaday gobolka Gedo kedib markii ay ciidamadii halkaasi ku sugnaa labo u kala jabeen kedib markii ay is qilaafeen maamulkii hore ee gobolka Gedo iyo rag uu si gaar ah u watay Farmaajo oo doonayey marka uu xoreyo gobolka Gedo inuu maamul kaka dhawaaqo.
Sidoo kale madaxweynaha Somaliya waxaa ku socda baaritaan hoose kedib markii la xaqiijiyey inuu mudadii uu joogay laga soo bilaabo xiligii midowga maxaakiinta ilaa maanta abuurtay dhaqaalo lagu qiyasay 20 Million oo dolar halka wadankii uu ku jiro fowdo, colaado iyo wax la mid ah iyadoo sida uu sheegay R/wasaarahii hore ee Somaliya uu madaxweynahu lunsaday dhaqaalo badan oo iskugu jiray deeqo loogu talo galay shacabka Soamliyeed iyo dib u dhiska dalka.
La soco wararka danbe iyo dowladii TFGda aheyd oo isku bedeshay jabhad.
· admin on May 09 2011 19:42:23 · 0 Comments · 1731 Reads ·
14,585,974 unique visits